घरमा आगलागी हुँदा संगै बाबुआमा बाहिर भागेर बचे छोराको भित्रै गयो ज्यान, अर्को छोरो छतबाट हाम फालेर जोगिए ! – Everest Pati
घरमा आगलागी हुँदा संगै बाबुआमा बाहिर भागेर बचे छोराको भित्रै गयो ज्यान, अर्को छोरो छतबाट हाम फालेर जोगिए !
काठमाडौं – गुल्मीमा सोमबार दिउँसो आगलागी हुँदा एक बाललको ज्यान गएको छ । ज्यान जानेमा समिर खनाल रहेका छन् । रहेका छन् । चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नं। ४ शान्तिपुरका १६ वर्षीय समिर खनालको आगलागी हुँदा ज्यान गएको हो । भने घर मालिक घाइते भएका छन् । ३ तले पक्की घरमा बिहान ११ः५० बजे आगलागी भएको थियो ।
मृत्यु भएका १४ वर्षीय समिर पूर्णबहादुरका कान्छा छोरा हुन् । खनाल र उनकी श्रीमती रुपा आगलागीमा परेर घाइते भएका छन् । उनीहरुलाई उपचारका लागि पाल्पा रिफर गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए । लकडाउनका कारण तीनै जना घरमा थिए । आगलागी सुरु हुनासाथ आमाबुवा बाहिर निस्कन सफल भएपछि समीर बाहिर नसक्दा उनको ज्यान गएको हो । आगलागी सुरु हुनासाथ बुवाआमा बाहिर निस्के तर छोरा सकेनन्, उनको ज्यान गयो’ खत्रीले भने ।
खत्रीका अनुसार खाद्यान्न र ग्यासको समेत पसल रहेको साढे दुई तलाको पक्की घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। घरको भुइँतलामा रहेका समिरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने उनका बुवाआमा दुवै जना घाइते भएकोले उपचारको लागि पाल्पा मिसन अस्पतालमा पठाइएको अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए। जेठो छोरा भने घरको माथिल्लो तलामा रहेको कारण छतबाट बाहिर हाम फालेर ज्यान जोगिएको अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए। आगलागी कसरी भयो यसबारे आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए। आगलागीपछि ग्याँसको सिलिण्डर पड्किँदा घरमा बढी क्षति भएको अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीलाई गगनको व्यंग्यः आँखा र कान जचाउँनुस्